I-Semalt - Izinzuzo ezinkulu ezingu-8 ze-Google Scraper
i-Google scraper iyithuluzi elibalulekile ukuze ulandele idatha kusuka ku-Google izixhumanisi futhi zingafakwa kumathebulethi, ama-smartphone noma idivayisi yekhompyutha kalula. Abacwaningi bahlale befuna ulwazi lokusekela amamodeli abo futhi babonise ukucabanga kwabo. Ngokufanayo, amabhizinisi adinga idatha ekhishiwe ukuze akhulise amabhizinisi abo futhi athole amakhasimende amaningi futhi amaningi emhlabeni wonke. Ezinye zezinzuzo ezinkulu ze-Google scraper zichazwe ngezansi - no depoist casino online bonus.
1. Hlunga idatha:
Idatha ivame ukuboniswa kwifomu engakhiwe futhi eluhlaza. I-Google scraper yenza kube lula ukuqoqa idatha futhi uyihlele ngokuvumelana nezidingo zakho. Kukusiza ukuqoqa ulwazi kusuka ezinombolo zokuxhumana, amakheli e-imeyli, amagama, nezindawo zabasebenzisi. Leli ithuluzi lokuhlunga elifanele elingakwazi ukwahlukanisa idatha engahleliwe ngolwazi oluwusizo olunikeza imiphumela engcono kakhulu nenembile kakhulu.
2. Ukuhlunga uhlu lwezobuchwepheshe:
Okwesibili inzuzo enkulu ye-Google scraper yukuthi ihlukumeza uhlu lwezobuchwepheshe ngokukhululeka okukhulu, futhi akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yedatha. Leli thuluzi lihle kakhulu kumasayithi e-ecommerce, lithola uhlu lwezobuchwepheshe, luhlela idatha, futhi lufake imiphumela oyifunayo kumaminithi.
3. Ukusheshisa nokunemba:
Nale nsizakalo, ungaqiniseka ngemininingwane eqondile. I-Google scraper ithembisa imiphumela esheshayo futhi yenza imisebenzi ethile ngesikhathi esisodwa. Uma kuqhathaniswa namanye ama-scrapers avamile, leli thuluzi lingakhipha ulwazi kusuka kuzixhumanisi eziningi ze-Google ngesivinini esimangalisayo nokunemba kugcinwa kulo lonke uhlelo.
4. Ukuqoqwa kolwazi oluwusizo nolwusizo:
Uma ubheka ukuqoqa ulwazi olubalulekile nolusizo lwendawo, ungasebenzisa i-Google scraper ukuze wenze umsebenzi wakho ufezeke. Abaphathi be-web kanye nezinhlangano ezahlukene baqalisa le nsizakalo ukuze bathole ulwazi olubili lwezobuchwepheshe nezendawo. Inezici ezingavamile futhi iqinisekisa ukuhlinzekwa kokuqukethwe okungalungile.
5. Izinzuzo zokusebenza:
Siyazi ukuthi ama-scrapers ahlukahlukene anikezela ngezinsizakalo nezinzuzo ezilinganiselwe, kodwa i-Google scraper iyinkonzo ephezulu futhi enhle kakhulu. Ungakwazi ukuhlanganisa izixhumanisi eziyizinkulungwane eziyishumi nalesi thuluzi, londoloza idatha kumafomethi we-CSV ne-JSON, noma ulanda ngqo ku-hard drive yakho ukusetshenziswa kokungaxhunyiwe ku-intanethi. Kuyafaneleka kubahleli futhi kungatholakala nganoma yikuphi ikhompyutha noma idivayisi yeselula.
6. Amathegethi amawebhusayithi ashukumisayo nakwe-e-commerce:
Nge-Google scraper, ungabheka amawebhusayithi ashukumisayo nakwe-e-commerce. Isibonelo, uma ufuna ukuthola imininingwane e-Amazon nase-eBay, ungasebenzisa kalula leli thuluzi ukuze wenze umsebenzi wakho ufezeke. Amawebhusayithi anezindawo eziningi, athi, amakhodi we-zip, namakheli e-imeyili angasuswa ngemizuzwana. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuqoqa ulwazi mayelana nemikhiqizo ehlukene, izincazelo zabo, nezithombe.
7. Kuhle izinkampani zabezindaba:
Izinkampani zemidiya zingazuza kulolu thuluzi futhi zingaqoqa idatha kusuka kumasayithi omphakathi wezokuxhumana futhi zithole izihloko ezihamba phambili nsuku zonke. Le nsiza esekelwe efwini inikeza idatha yesikhathi sangempela, isindisa isikhathi sakho, futhi ithuthukise ukusebenza kwakho kahle.
8. Kuyafaneleka ezinkampanini zokuhamba:
Izinkampani zokuhamba ezifuna ukukhipha idatha kusuka ku-intanethi ye-intanethi zingasebenzisa lesi sikhala ukuze senze imisebenzi yaso. Ungathola ulwazi kusuka ku-TripAdvisor nase-Trivago futhi ungaqala i-portal yakho yokuhamba ngezinsuku ezimbalwa.